नेपाल आज | २०७७ श्रावण २० गतेको राशीफल
मङ्गलबार, २० साउन २०७७ गते प्रकाशित - नेपाल आज
भाग्य मेरो पक्षमा छ? के उसले मलाई कल गर्ने छ? के म सफल हुने? हामीले कम्तीमा एकपटक आज के हुन्छ भनेर जान्न खोज्छौँ । राशि क्यालेन्डरको १२ चिन्हमा, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, लियो, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुम्भ र मीनको विशिष्ट प्रतिभा हुन्छ जसले व्यक्तिलाई परिभाषित गर्दछ । के तपाईं बिहान उठ्ने बित्तिकै तपाईंको लागि दिनको भण्डारमा के छ भनेर जान्न मन हुदैन ? त्यसोभए ती नतीजाहरू आज तपाईंको पक्षमा हुनेछन् कि भनेर जान्नको लागि पढ्नुहोस् ।
सामान्यः तपाई विकासको नयाँ चरणमा प्रगति गर्न सक्नुहुन्छ । उचित योजना बनाउने र पेशेवर दृष्टिकोण अपनाई तपाईंको प्रयासहरूको सफलता सुनिश्चित गर्नेछ ।
कार्यक्षेत्रः तपाईं महत्त्वपूर्ण सेमिनार वा व्यवसाय बैठकको लागि तयारी गर्दै हुनुहुन्छ र तपाईंलाई नयाँ गन्तव्यको लागि यात्रा आवश्यक पर्दछ । कुनै दिन तपाईको कामका लागि कहिँ समान हुँदैन र तपाईले आफ्नो हालको भूमिकाको आनन्द लिनु हुन्छ ।
प्रेम र सम्बन्धः तपाई आफ्नो पार्टनरलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा बढी इमान्दार हुन सक्नुहुन्छ। यो तपाईं को दुबै बीच अझ राम्रो समझ सक्षम हुनेछ ।
स्वास्थ्यः तपाईं आफ्नो व्यायाम योजना धार्मिक रूपमा गरि रहनुभएको छ र पहिले नै लाभहरू कटनी गर्दै हुनुहुन्छ। तपाई उर्जावान हुनुहुन्छ ।
सामान्यः दिन अनुकूल परिणामको आश्वासन दिन्छ। तपाईं आफ्नो लक्ष्य को दिशा मा प्रयासहरु राख्न सक्षम हुनुहुन्छ। यसले सन्तोषजनक नतिजा प्राप्त गर्न सक्छ। तपाईं मित्रहरूबाट समर्थन पनि प्राप्त गर्नुहुनेछ।
कार्यक्षेत्रः तपाईंको चिन्हमा युरेनसले तपाईंलाई बढी प्रेरित गर्दछ र तपाईंलाई एउटा ठूलो परियोजनामा लगानी गर्न मद्दत गर्दछ । तपाईं धेरै काम लिन सक्नुहुनेछ र नयाँ काममा आफैं प्रमाणित गर्न सक्नुहुनेछ ।
प्रेम र सम्बन्धः तपाईं आफ्नो पार्टनरमा इमान्दार ढंगले आफ्ना भावनाहरू व्यक्त गर्न सक्षम हुनुहुन्छ । यो सम्बन्ध मा खुशी र आकर्षण को लागी मार्ग प्रशस्त हुनेछ ।
स्वास्थ्यः तपाईंको छायाँ क्षेत्रमा मंगल ग्रहले तपाईंलाई थोरै सुस्त महसुस गराउँदछ, र तपाईंलाई आवेगहीन बनाउँदछ ।
सामान्यः तपाईंले आफ्नो चिन्ता र कुनै पनि असुरक्षित भावनाहरूलाई रोक्न आवश्यक छ जुन यस दिन आउँदछ। नकारात्मक सोचाइ नराख्नुहोस ्। सकारात्मक सोच्नाले तपाईंलाई चमत्कारहरू प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ ।
कार्यक्षेत्रः तपाईं कार्यस्थलमा असामान्य पहल गर्ने मूडमा हुनुहुन्छ, तर आफैंलाई धेरै ध्यान नदिन सावधान रहनुहोस्। तपाईंको केहि सहकर्मीहरूले तपाईंलाई पक्रन सक्दो प्रयास गरिरहेका हुन सक्छन् ।
प्रेम र सम्बन्धः यस दिन तपाईंको पार्टनरलाई विश्वस्त पार्न तपाईंलाई गाह्रो लाग्छ । त्यहाँ मतभिन्नता उत्पन्न हुने सम्भावना पैदा हुनेछ ।
स्वास्थ्यः तपाईं तपाई आफैंलाई धेरै सहज स्वास्थ्यमा फेला पार्न सक्नुहुन्न। सम्भवतः घाँटीको जलन हुने सम्भावना हुन्छ र यसले तपाईलाई केहि चिन्ताको कारण दिन्छ ।
सामान्यः तपाईं आफ्नो कार्यहरू धेरै चाँडो हुनुहुनेछ। यो तपाईंभित्र रहेको आगोको कारणले हुनेछ। तपाईको दिमाग तपाईको कल्याणको लागि केहि उपयोगी निर्णय लिनको लागि द्रुत हुनेछ ।
कार्यक्षेत्रः बिहान एक बिस्तारै सुस्त सुरुवात पछि तपाईंको फाइलहरूमा अत्यधिक ध्यान केन्द्रित हुनेछ। तपाइँ जानकारी को लागी केहि ढिलाइको बावजुद, समय मा सबै कुरा मिलाउन प्रबन्ध गर्नुहोस ।
प्रेम र सम्बन्धः उत्कृष्ट भावनाहरू तपाईंको दिमागमा चल्नेछ र तपाईं यसलाई आफ्नो पार्टनरमा प्रदर्शन गर्नुहुनेछ । यसले एक अर्कासँग तपाईंको सम्बन्ध सुधार गर्न मद्दत गर्दछ ।
स्वास्थ्यः उर्जाको स्तर उच्च हुनेछ र यसले तपाईलाई राम्रो स्वास्थ्यमा राख्छ ।
सामान्यः तपाईं दिन धेरै आशाजनक पाउनुहुनेछ। तपाईं निष्कपट प्रयासका साथ सबै उद्देश्यहरू प्राप्त गर्न सक्षम हुनुहुनेछ। अधिक साहस र अठोट पनि तपाईमा देखिने छ। तपाईले बढी आत्मविश्वास पनि महसुस गर्नुहुन्छ ।
कार्यक्षेत्रः तपाईंको प्रोजेक्टहरू परिणाम स्वरूप उफ्रिनेछन। तपाईं टोलीको एक ऊर्जावान र गतिशील सदस्य हुनुहुन्छ र यो स्पष्ट हुँदैछ कि तपाईंसँग प्राकृतिक नेतृत्व कौशल छ ।
प्रेम र सम्बन्धः तपाईले आफ्नो पार्टनरप्रति इमानदारीता प्रदर्शन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं आफ्नो प्रियलाई अधिक खुसी राख्न सक्षम हुनुहुनेछ र यो राम्रो समझ को लागी मार्ग प्रशस्त हुनेछ ।
स्वास्थ्यः तपाईले आफ्नो दिमागमा बढी लचिलोपनको आनन्द लिन सक्नुहुन्छ। यसका कारण ऊर्जा स्तर उच्च हुनेछ ।
सामान्यः तपाईंले यस दिन प्रमुख निर्णयहरू लिनबाट जोगिनु पर्छ। तपाईले केही असुरक्षित महसुस गर्नुहुनेछ र कम खुसी पनि महसुस गर्नुहुनेछ ।
कार्यक्षेत्रः तपाई आफ्नो कामप्रति निकै प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ। तपाईंलाई थप गम्भीर जिम्मेवारीहरू दिइनेछ, यसको मतलब तपाई धेरै समयसम्म अफिसमा बस्नुपर्दछ ।
प्रेम र सम्बन्धः तपाईंको साथीसँग सञ्चार समस्या हुन सक्ने सम्भावना छ। तपाईं राम्रो मुडमा नहुन सक्नुहुनेछ, त्यसैले एक अर्कासँग कुरा गर्नबाट जोगिनु बुद्धिमानी हुनेछ ।
स्वास्थ्यः तपाई घाँटीको जलनले चिन्तित हुन सक्नुहुन्छ। चिसो आईटमहरू उपभोग नगर्नुहोस ्।
सामान्यः तपाईंले आफ्नो कार्यहरू सम्हाल्न अझ बढी प्रयासहरू गर्नुपर्नेछ । यस दिन कुनै ठूलो निर्णय नलिन’होस् । दिन अझ राम्रो बनाउनको लागि केही धैर्यता आवश्यक छ ।
कार्यक्षेत्रः कार्यस्थलमा, तपाईका सहयोगीहरूले तपाईंको विचारहरू मन पराउँछन् । तपाईं आफ्नो सम्भावनालाई कहिल्यै हल्का नठान्नुहोस्। तपाई सोच्नु भन्दा धेरै प्रतिभाशाली हुनुहुन्छ ।
प्रेम र सम्बन्धः तपाईं आफ्नो पार्टनरलाई आफ्नो प्रेमको दाबी गर्नुहुन्छ। यद्यपि तपाईंको प्रियसँग राम्रो समझदारी विकास गर्ने सम्भावना कम हुनेछ ।
स्वास्थ्यः स्वास्थ्य यस दिन औसत हुन सक्छ । आँखाको जलनले पनि तपाईं व्याकुल हुन सक्नुहुन्छ ।
सामान्यः तपाईंले चीजहरू अनौपचारिक रूपमा लिनु पर्छ। कुनै पनि भावनाहरूलाई तपाईंको दिमागमा डुब्न नदिनुहोस् किनकि यसले तपाईंको प्रगतिलाई असर गर्न सक्छ ।
कार्यक्षेत्रः मार्सले दृढता र दक्षता मार्फत तपाईंलाई कठिनाइहरू पार गर्न अनुमति दिनेछ। तपाईंको प्रतिक्रिया र अन्तर्दृष्टि सबै कुराको लागि समाधान खोज्न मद्दत गर्दछ ।
प्रेम र सम्बन्धः तपाईं आफ्नो पार्टनरसँग स्वतन्त्र दृष्टिकोण कायम गर्न सक्षम हुनुहुने छैन । तपाईंले गम्भीर रूपमा अझ हल्का चीजहरू लिने सम्भावना छ र यसले सम्बन्धमा आकर्षणलाई असर पार्दछ ।
स्वास्थ्यः तपाईंले यस दिनमा केही सुविधाहरूमा सम्झौता गर्नुपर्दछ। यसले काँधमा दुखाइ जस्ता केही स्वास्थ्य समस्याहरू निम्त्याउन सक्छ ।
सामान्यः तपाई आफ्नै प्रयासले सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। एकै साथ तपाई कहिलेकाँही सन्तुष्ट पनि महसुस गर्नुहुनेछ, त्यसैले तपाईको आत्मविश्वासको स्तर माथि राख्नु बुद्धिमानी हुनेछ ।
कार्यक्षेत्रः तपाईको बार्टर गर्ने कला आज काममा आउँनेछ र तपाईका सहकर्मीहरूले पनि तपाईको प्रयासको लागि बधाई दिनेछन् । तपाईको हाकिमले तपाईको लागि जीवनलाई सहज बनाएको छैन तर तपाई अहिले अवस्था भन्दा बाहिर आउनु भएको छ ।
प्रेम र सम्बन्धः तपाईंलाई आफ्नो पार्टनरसँग भेट्न सजिलो हुनेछ र एक अर्कासँग केही उपयोगी कुराकानी गर्नुहुनेछ । यसले तपाईंलाई भविष्यको लागि राम्रो योजना बनाउन सक्षम गर्दछ ।
स्वास्थ्यः तपाई शारीरिक हिसाबले फिट हुनुहुनेछ। तपाईलाई कुनै स्वास्थ्य समस्या हुँदैन ।
सामान्यः तपाईंलाई कामहरू गर्न गाह्रो लाग्ने सम्भावना छ। यसले तपाईंको स्वभाव हराउन सक्छ, त्यसैले धैर्य रहन र तपाइँको दृष्टिकोणमा अधिक दृढ हुन आवश्यक छ ।
कार्यक्षेत्रः तपाईं आफ्नो व्यावसायिक स्थिति सुदृढीकरण गर्न चाहानुहुन्छ र केहि परिवर्तनहरू गर्नुहुन्छ जुन तपाईंलाई प्रगति गर्न आवश्यक छ भन्ने लाग्छ। बृहस्पति तपाइँ निर्णय गर्न मद्दत गर्दछ ।
प्रेम र सम्बन्धः तपाईले आफ्नो पार्टनरमा जलनका चिह्नहरू देखाउन सक्नुहुन्छ। यो हुन सक्छ किनकि तपाईं आफ्नो प्रिय द्वारा बेवास्ता गरिएको महसुस गर्नुहुन्छ ।
स्वास्थ्यः तपाई आँखा र घाँटी जाँचको लागि जानु आवश्यक छ किनकि तपाईलाई चिन्ता गर्ने सम्भावना धेरै हुन सक्छ। यसको लागि तपाईंलाई थोरै पैसा खर्च गर्न पनि आवश्यक पर्दछ ।
सामान्यः तपाईले दिन अवरोध र ढिलाइले भरिएको पाउनुहुनेछ। महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू अर्को दिनको लागि स्थगित गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ। तपाईं संगीत सुनेर आराम गर्न सक्नुहुन्छ, किनकि यसले तपाईंलाई राहत प्रदान गर्दछ ।
कार्यक्षेत्रः तपाईलाई आफ्नो कार्यमा केन्द्रित रहन वास्तवमै गाह्रो लाग्छ। तपाईं यो भयावह दिनको लागि प्रतीक्षा गर्न सक्नुहुन्न ।
प्रेम र सम्बन्धः तपाईले आफ्नो साथीसँग धेरै सन्तुष्टि लिन सक्नुहुन्न । तपाईं आफ्नो प्रियजनको साथ विवादमा पनि जान सक्नुहुन्छ ।
स्वास्थ्यः तपाईं खुट्टा दुखाईद्धारा चिन्तित हुन सक्नुहुन्छ ।
सामान्यः तपाईं दिन को लागी राम्रो प्रगति गर्न सक्षम हुनुपर्दछ, सकारात्मक सोच्नुहोस्, अन्ततः सफलता तपाईंको ढोका ढकढक्याउनेछ ।
कार्यक्षेत्रः तपाईंलाई थप जिम्मेवारी दिइनेछ र यसले चाँडै नै प्रगतिको घोषणा गर्र्र्नेछ । यदि तपाईं काम खोज्दै हुनुहुन्छ भने, त्यो रोजगार प्राप्त गर्न आफ्नो कार्यप्रणालीमा भरोसा गर्नुहोस् ।
प्रेम र सम्बन्धः तपाइँको पार्टनरको साथ स्वर्गमा साँझको जस्तो हुनेछ । तपाईं खुशीको साथ गहन हुनेछ र यसलाई आफ्नो प्रियसँग साझा गर्नुहुनेछ ।
स्वास्थ्यः तपाईले राम्रो स्वास्थ्यको आनन्द लिन सक्नुहुन्छ । यो तपाईंको खुशी र सकारात्मक दिमागको कारण हुनेछ ।